Famonoana an-dRavolomaso : Baikon-dRavalomanana Marc -
AccueilRaharaham-pirenenaFamonoana an-dRavolomaso : Baikon-dRavalomanana Marc
Famonoana an-dRavolomaso : Baikon-dRavalomanana Marc
06/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny faha-10 Aprily 2002 no nosamborin’ireo milisy mitam-piadiana teny Antaninarenina i Gaby Rolland Rajaonarivelo fantatra na Ravolomaso niaraka tamin’i Ralipo-be sy Yves Ralison mpanao gazety tao amin’ny RTA, araka ny baikon-dRavalomanana Marc. Avy hatrany dia nentina tao Ambohitsorohitra izy telo mianaka ireto ka novonina sy niharan’ny fampijaliana mafy (torture). Maty vokatr’izany vono izany i Ravolomaso, naratra mafy kosa ireo roalahy voalaza anarana etsy ambony.
Heloka be vava voalaza ao amin’ny Fehezan-dalana Famaizana ny vonoan’olona. Tsy nisy afaka nihetsika mihitsy anefa tamin’izany satria teo am-pelatanan-dRavalomanana Marc ny fahefana tsy refesi-mandidy. Nangina tsy nisy tohiny ny raharaha nandritra ny fito taona nahateo amin’ny fitondrana ny antoko TIM hatramin’ny taona 2009. Niakatra teo amin’ny fitondrana i Andry Rajoelina izay niantehitra tamin’ny zanaky ny ambany tanàna nanomboka teny amin’ny kianjan’ny 13 May mandra-pahatongany teo amin’ny fahefana faratampony. Mba nanantena mafy mihitsy ireo niandrandra “fanovàna” fa hanokatra fanadihadiana mikasika iny famonoana an-dRavolomaso iny ny fitondrana Tetezamita saingy indrisy. Tapitra ihany ny folo taona (2012) araka ny voalazan’ny lalàna ahafahana manenjika ireo izay tomponandraikitra tamin’izany vonoan’olona izany fa tsy nisy nasian’ny fitondrana HAT “sira” araka ny fitenin-jatovo.
Ny fanenjehana eo anatrehan’ny Tribonaly angamba no mety tsy ho azo atao intsony satria efa tapitra ny folo nomen’ny lalàna ahafahana manao izany kanefa tsy mbola afaka ao an-tsain’ny zanaka ambany tanàna mihitsy iny habibian-dRavalomanana Marc iny. Tsy misy dikany eo anatrehan’ity filoha tale jeneralin’ny Tiko ity tokoa ny aina izany ary efa noporofoin’ny tantara fa tsy nisara-dia tamin’ny rà mandriaka mihitsy ny tenany nandritra izay nahafantarana azy teo amin’ny sehatry ny politika izay na dia nandrangaranga hatrany ny Baiboly sy ny Fivavahana aza. Rà mandriaka no niakaran’ny teo amin’ny fitondrana ny taona 2002, rà mandriaka ihany koa no nialany teo ny taona 2009 dia izao mikasa hampiditra ny vahoaka anatin’ny fifandonana sy ny korontana izao indray.
Sambany teo amin’ny tantaram-pirenena, indrindra teo amin’ny tontolon’ny baolina kitra malagasy ny hiatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika na ny Can. Fifaninanana kaontinantaly tanterahina any Cameroun, ny 15 jona – 13 jolay 2019. Tafita hiatrika ...Tohiny